सकियो चालक अनुमतिपत्र छपाइः वितरण कहिले ? « Salleri Khabar
सकियो चालक अनुमतिपत्र छपाइः वितरण कहिले ?
८ भदाै, काठमाडौँ – गत आर्थिक वर्षको शुरुमा झण्डै आठ लाख चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न बाँकी थियो । चालु आवको पहिलो महिना सकिँदा छाप्न बाँकी अनुमतिपत्रको सङ्ख्या ज्यादै कम छ । यातायात व्यवस्था विभागले अधिकांश अनुमतिपत्र छापे पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले कहिले वितरण गर्ने भन्ने निश्चित छैन ।